Waa maxay on imtixaanka HiSET ah? | USAHello | USAHello
Waa maxay on imtixaanka HiSET ah? Habka ugu fiican ee si aad isugu diyaariso imtixaanka waa in la ogaado waa waxa imtixaanka HiSET ah. Halkan waxaa ku qoran warbixin aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan imtixaanka HiSET ah. Baro sida loo baran iyo barbarato imtixaanka.
Waa maxay on imtixaanka HiSET ah? Tani waa waxa aad filan karto:
Waxaad xarunta imtixaanka a tegi doonaa in ay qaataan imtixaanka HiSET ah
Waxaad ma qaadan karaan imtixaanka HiSET online
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka on computer ama warqad xarumaha imtixaanka ugu
imtixaanka oo dhan qaadataa muddo ka badan wax yar ka 7 saacadood, laakiin waxaad qaadan kartaa 5 qaybo maalmo kala duwan ka badan dhowr bilood. Tani waa wanaagsan yahay, waayo, shaqaalaha iyo waalidiinta mashquul. Waxaa loola jeedaa waxaad dooran kartaa inaad wax ka barato qayb kasta ee imtixaanka si gooni gooni ah. Ama waxaad ka qaadan kartaa qaybaha aad ogtahay, ka dibna ay isticmaalaan waqti aad wax ka barato, waayo meelaha ugu adag.
Waxaad qaadan kartaa imtixaan online lacag la'aan ah si loo arko haddii aad diyaar u tahay. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in download baaritaano badan oo rasmi ™ HiSET dhaqanka si offline qaado.
Imtixaanka HiSET ™ leeyahay oo dhan su'aalo doorashooyin badan marka laga reebo hal su'aal essay.
A su'aal doorashooyin badan ku siinayaa doorashada ka mid ah jawaabaha. Su'aasha laga yaabo in ay ku saabsan qoraalka, ama waxay noqon kartaa oo ku saabsan sawir ama map. Waxaa laga yaabaa inay jaantuska a, oo ay ku jiraan shaxda ah, miis, ama garaaf. Hoos waxaa ku qoran qoraalka ama image noqon doonaa su'aal ka dibna liiska jawaabo, sida tusaale ahaan si xaq. Waxaad dooran xaq ka mid ah adigoo gujinaya goobaabin on computer ah, ama ku ganaya on warqad.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan su'aalo doorashooyin badan waa in jawaabtu tahay had iyo jeer waxaa idinka soo hor jeedda. Waa inaad u ogaado taas oo ka mid ah waa. Si arrintan loo sameeyo, aad u baahan tahay si ay u eegaan si taxadar leh macluumaadka lagu siiyo. aad si taxadir leh u akhri su'aasha, aad. Waxaa laga yaabaa in aad trick waxoogaa yar - tusaale ahaan, waxay dhihi kara, Taas oo jawaab run ma aha?
Baaritaanku ™ HiSET yeelan doonaa hal su'aal maqaalka qaybta loo yaqaan Language Arts - Qoraalka. Su'aashan, waxaad yeelan doontaa qoro weedho yar adiga kugu saabsan mawduuc waxaa la siiyaa.
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka HiSET ™ ee warqadda ama computer ah. Isku day inaad ka qaabab kala duwan - waxaad awoodi doontaa inaad buuxiso dhammaan noocyada su'aasha waxay noqon doontaa haddii waqti hore aad ku dhaqmaan!
Download ah su'aalo rasmi ah muunad in ay isku dayaan HiSET ™ su'aalo ku saabsan warqadda.
Isticmaal baaritaan rasmi ah tababar lacag la'aan ah in ay isku dayaan HiSET ™ su'aalo ah oo ku saabsan computer ah. Waxaad heli doontaa inay la soo wareegto in la cinwaan email ah in ay isku dayaan su'aalahan.
Waa maxay on imtixaanka HiSET ah? Waxaa jira shan-hoosaadyo (maadooyinka) ku saabsan imtixaanka HiSET ™: cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta (xisaabta gaaban), akhriska iyo qoraalka.
fananka af - reading
The fananka af HiSET ™ - imtixaanka akhriska qaadataa 65 daqiiqo. Waxeey heesataa 50 su'aalo doorashooyin badan.
Baaritaankaan wuxuu cabbirayaa awoodda aad si ay u fahmaan oo tarjumaan wax akhriska. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan waxyaabaha aad ka akhrisan.
Qoraalkani wuxuu ku waxaa laga yaabaa in ka hadalka ah, warqad, article wargeyska a, ama maris ah ka soo buug. 60 boqolkiiba Qoraallada waa ka suugaanta (tixaha ama gabay tusaale ahaan) iyo 40 boqolkiiba Qoraallada waa macluumaad, sida articles. Qoraalka waxaad ka akhrisan noqon doonaa oo ku saabsan 400 in 600 erayada dheer.
fananka af - qoraal
The fananka af HiSET ™ - imtixaanka oo qoraal qaadataa 120 daqiiqo. Waxeey heesataa 2 qaybo ka mid: qaybta hore la 60 su'aalo doorashooyin badan socdaa 75 daqiiqo, iyo qaybta labaad la 1 su'aasha maqaalka la soo dhaafay 45 daqiiqo.
Baaritaankaan wuxuu cabbirayaa awoodda aad edit iyo saxo Heerka text American Ingiriisi. Waxay ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan siyaabaha saxda ah ee qoraalka. Waxaa tijaabin doonaa fahamka naxwaha.
Iyada oo su'aasha maqaalka, tijaabiyeyaal ay doonayaan in ay arkaan in aad abaabuli kartaa macluumaadkaaga, horumariyo fikrad ama opinion, tusaalooyin, oo si cad u qor oo ku saabsan fikirkaaga.
Uma baahnid in aad in aad ogaato wax xaqiiqooyinka noqotay imtixaanka Fananka Af. Waxaad u baahan tahay si ay u muujiyaan in aad fahanto waxa aad akhrineyso by jawaabaya su'aalaha, iyo in aad ku qori kartaa Ingiriisi saxda ah.
The imtixaanka cilmiga bulshada HiSET ™ socdaa 70 daqiiqo. Waxeey heesataa 60 su'aalo doorashooyin badan.
tijaabiyeyaal The filan waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah aqoon aasaasi ah oo ku saabsan adduunka iyo Maraykanka, laakiin waxa ay qiyaastaa kartida aad si ay u fahmaan oo tarjumaan macluumaad dheeraad ah oo ka badan waxa ay ku imtixaamaa aqoonta xaqiiqooyin. Waxaad ka akhriyi doonaa iyo qiimeyn warbixin ku saabsan maadooyinka sida taariikhda, cilmiga siyaasadda, cilmi nafsiga, cilmiga, cilmiga aadanaha, Joqoraafi iyo Cilmiga dhaqaalaha.
Su'aaluhu waxay isticmaali dukumenti oo kowaad, boodhadhka, sawir, waqtiyada, maps, garaafyada, miisaska, gooldhalinta iyo sidoo kale meelihii reading.
Imtixaanka xisaabta HiSET ™ socdaa 90 daqiiqo. Waxeey heesataa 55 su'aalo doorashooyin badan. Waxaad isticmaali kartaa calculator ah qaybtan. version The computer imtixaanka this ayaa calculator ku-screen. Haddii aad qaadatid imtixaanka warqaddan dhiibay, xarunta imtixaanka aad ku siin doonaa xisaabiyaha Xararad. Go'aanka for nooca calculator isticmaalo waa ilaa gobolkaaga.
Baaritaanku wuxuu cabbiri doonaa fahamka dhowr nooc oo ah xisaabta. Su'aalaha waxaa lagu soo bandhigay sida dhibaatooyinka wax ku ool ah. Waxaad u jawaabi doonaa oo isticmaalaya hawlaha tiro, cabiraada, qiimaysay, Fasiraadda xogta iyo fikirka caqli galka.
Inta badan imtixaanka u isticmaali doonaa oo kaliya xirfadaha xisaabta aasaasiga ah iyo xirfadaha sababaynta. su'aalo badan (45%) adeegsadaa aljebrada, iyo qaar ka mid ah u isticmaali doonaa geometry.
Imtixaanka xisaabta HiSET ™ qaadataa 80 daqiiqo. Waxeey heesataa 60 su'aalo doorashooyin badan.
Baaritaanku wuxuu cabbirayaa fahamkaaga of qaar ka mid ah fikradaha sayniska aasaasiga ah. Waxaa tijaabin doonaa awoodda aad u leedahay in ay isticmaalaan aqoonta sayniska content, codsan mabaadi'da baaritaan cilmiyeed (hab cilmiyaysan), oo tarjumaan iyo qiimeeyo macluumaadka cilmiyaysan.
Su'aaluhu waxay isticmaali doonaan garaafyada, miisaska iyo gooldhalinta iyo sidoo kale qoraalka si ay u soo bandhigaan warar iyo natiijooyinka.
Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan oo dhan hoosaadyo HiSET ™.
Si aad u gudbaan HiSET ™, aad leedahay si aad dooro jawaabta saxda ah in tiro ka mid ah qaar ka mid ah su'aalaha. Kuwa jawaabo sax ah idin siin doonaa dhibcood. Tirada guud ee suurtogalka ah ee dhibcood waxaad ka heli kartaa dhammaan shanta hoosaadyo wada yahay 100.
score Your total on hoosaadyo dhammu waxay ku wada waa in ay ahaadaan ugu yaraan 45 farta ku fiiqay ee suurto gal ah 100 Dhibco.
On kasta imtixaan-hoosaadyo, waa in aad ugu yaraan 8 out of suurto gal ah 20 Dhibco.
On su'aasha maqaalka ee fananka af ah - qoraal imtixaanka, waa in aad ugu yaraan 2 out of suurto gal ah 6 Dhibco.
Waxaan qabaa su'aalo ku saabsan sida loo qaato imtixaanka HiSET ™ in aan gobolka.
Waad awoodaa aad u ogaato sida loo qaato ee HiSET ™ imtixaanka in gobolkaaga.